Dingana roa fotsiny ho an'ny faritra aerospace sarotra | Dongtai
Dingana roa fotsiny ho an'ny faritra aerospace sarotra
Orinasa iray manampahaizana manokana momba ny famokarana singa aerospace complexe dia nanampy tamin'ny famolavolana fianakaviana iray misy faritra 45 haingam-pandeha ho an'ny kitapo helikoptera amin'ny dimy volana monja, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Alphacam CAD / CAM.
Ny Hawk 8000 Cargo Hook dia voafantina ho an'ny helikoptera manaraka ny fizahana Bell 525 tsy misy farany, izay amboarina ankehitriny.
Drallim Aerospace dia notanterahina tamin'ny famolavolana ny fehin-kibo izay ilaina ny fitantanana ny karama 8,000lb. Ny orinasa dia efa niara-niasa tamin'ny Leemark Engineering momba ny vokatra marobe, ary nanatona ilay orinasa hamorona ny casings, firakotra solenoid, fifamatorana misy enta-mavesatra, boka ary antsy ho an'ny fivoriambe.
Leemark dia tarihin'ireo mpirahalahy telo, Mark, Kevin ary Neil Stockwell. Napetraky ny rainy nandritra ny 50 taona lasa izay, ary mitazona ny etin'ny fianakaviana momba ny kalitao sy ny serivisy mpanjifa izy ireo.
Fanomezana fototra amin'ny orinasa aerospace Tier 1, ny faritra misy azy dia azo jerena ao amin'ny fiaramanidina toy ny fiaramanidina Lockheed Martin F-35, fiaramanidina mpiady Saab Gripen E ary koa ny helikoptera, ny polisy ary ny helikoptera sivily, miaraka amin'ny seza ejector sy satelita.
Ny ankamaroan'ny singa dia be pitsiny, namboarina tamin'ny milina CNC 12 tao amin'ny orinasa tany Middlesex. Ny talen'ny orinasa Leemark sy ny mpiandraikitra ny famokarana Neil Stockwell dia manazava fa 11 amin'ireo milina ireo dia atokana miaraka amin'i Alphacam.
Neil dia nilaza: "Izy io no manaisotra ny Centre Matsuura Machining 3 sy 5-axis, CMZ Y-axis ary 2-axis Lathes ary Agie Wire Eroder. Ny hany tsy ampiasainy dia ny Spark Eroder, izay manana rindrambaiko miresaka. ”
Nilaza izy fa singa iray tena ilaina amin'ny fampitaovana ny rindrambaiko rehefa namokatra ny singa Hawk 8000 Cargo Hook, indrindra avy amin'ny aluminiera aerospace sy ireo bileta vita amin'ny stainless amerikana mahery vaika Amerikanina 564, ary misy plastika kely iray.
Hoy i Neil: “Tsy vitan'ny nanamboatra azy ireo fotsiny izahay, fa ny famokarana azy ireo toy ny ataon'izy ireo amin'ny habetsaky ny volontsika no ilaina, ary mila fotoana fihodinana mafy izahay. Amin'ny maha-aerospace, misy tatitra AS9102 miaraka amin'ny singa rehetra, ary midika izany fa nasiana tombo-kase ny fizotrany, ka rehefa niditra ny famokarana feno izy ireo dia tsy nisy fotoam-panondro intsony.
"Nahavita ny zava-drehetra tao anatin'ny dimy volana izahay, noho ny paikadin-tsoratr'i Alphacam izay nanampy anay hanatsara ny milina avo lenta sy ny fitaovana fanamoriana."
Leemark dia manamboatra ny ampahany rehetra azo atao amin'ny fantsona; ny sarotra indrindra, amin'ny lafiny masinina 5-axis machining, no tranga fanarona sy solenoida. Fa ny tena marina dia ny leveram-by izay mitondra fihetsika maro ao anaty vatan'ny hatoana.
"Ny ampahan-jaton'ny singa mitrandraka dia manana fatra amin'ny azy ireo", hoy i Neil Stockwell. "Ny ankamaroan'ny singa mihodina dia manana fandeferana mafy kokoa."
Nilaza ny talen'ny injeniera Kevin Stockwell fa ny ora fandaharana dia miovaova eo ho eo amin'ny antsasak'adiny ho an'ny ampahany tsotra, ka hatramin'ny 15 ka hatramin'ny 20 ora ho an'ny singa be pitsiny, miaraka amin'ny fotoam-pivarotan'ny masinina ka hatramin'ny roa ora. Hoy izy: "Ampiasao ny paikady miovaova amin'ny onjam-peo sy ny fampiasan-kery amin'ny trosa izay manome vola lehibe ho antsika amin'ny fotoan'ny fihodinana ary manitatra ny fiainana fitaovana."
Ny dingana fandaharan'asa dia manomboka amin'ny fanafarana ireo modely STEP, miasa tsara amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny famokarana ny ampahany, ary ny habetsaky ny fananana ilain'izy ireo mihazona azy mandritra ny fanapahana. Tena zava-dehibe amin'ny filozofian'izy ireo ny fitazonana ny masinina 5-axis voafetra amin'ny asa roa na aiza na aiza misy azy.
Nanampy i Kevin hoe: “Ilazantsika ny lafiny iray mba hiasantsika amin'ny hafa rehetra. Dia milina fanindroany ny tarehy farany. Mametra ny ampahany betsaka araka izay azontsika atao atao amin'ny fananganana roa fotsiny. Ireo mpifaninana dia lasa mihasarotra kokoa amin'izao fotoana izao rehefa miezaka ny mametra ny lanjan'ny zavatra rehetra mandeha amin'ny fiaramanidina ny mpamorona. Saingy ny fahafaha-5-axis misy an'i Alphacam Advanced Mill dia midika hoe tsy vitan'ny hoe mamokatra ihany isika, fa afaka mitazona ny fotoan'ny fihodinana sy ny vidiny ihany koa. ”
Miasa avy amin'ny rakitra STEP nafarana izy, nefa tsy mila mamorona modely hafa ao anatin'ny Alphacam, amin'ny alàlan'ny fandaharana fotsiny ny toerany, mifantina endrika sy fiaramanidina, ary avy eo hanina avy eo.
Izy ireo koa dia tafiditra be loatra amin'ny orinasam-pifandraisana ejector, izay vao avy niasa tamin'ny tetik'asa fohy fohy vao haingana izay manana singa vaovao sy be pitsiny.
Ary ny softare CAD / CAM vao haingana dia nampiseho lafiny iray hafa amin'ny fahaiza-manaony mba hamokarana baiko averimberina ireo singa ho an'ny fiaramanidina mpiady Saab Gripen, 10 folo taona.
Hoy i Kevin: “Tamin'ny voalohany dikan-teny Alphacam no namolavolana azy ireo ary nivezivezy tamin'ny alàlan'ireo mpandefa hafatra tsy ampiasaintsika intsony. Saingy tamin'ny alàlan'ny famolavolana indray azy ireo sy ny famerenana azy ireo miaraka amin'ny dikan-tsarin'i Alphacam amin'izao fotoana izao, dia nampihena ny fotoana fihodinana izahay tamin'ny alàlan'ny fandidiana vitsy kokoa, ary nitazona ny vidiny nifanaraka tamin'ny folo taona lasa izay. ”
Nilaza izy fa be pitsiny ny faritra amin'ny satelita, misy mandritra ny 20 ora ny fandaharana, nefa nanombantombana i Kevin fa haharitra 50 ora raha tsy Alphacam.
Mihazakazaka 18 ora isan'andro ny milina orinasa fa ny ampahany amin'ny drafi-panatsarana mitohy dia ahitana ny fanitarana ny orinasa 5 500ft2 amin'ny alàlan'ny 2 000ft2 fanampiny hananganana fitaovana milina fanampiny. Ary ireo milina vaovao ireo dia mety hampiditra rafitra pallet ampiasain'i Alphacam, ka afaka mandroso handrehitra ny famokarana izy ireo.
Neil Stockwell dia nilaza fa rehefa nampiasa ilay rindrambaiko nandritra ny taona maro ilay orinasa dia nanontany tena hoe lasa nanjary henjana ny momba azy io ary nijery fonosana hafa teo an-tsena. "Hitanay anefa fa i Alphacam no tena tsara indrindra ho an'i Leemark," hoy izy namarana.